ဒူဒူကြီး: Generator Synchronizing, Parallel Operation နဲ့ Load Sharing (၃)
Generator Synchronizing, Parallel Operation နဲ့ Load Sharing (၃)
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှာ၊ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ နည်းပညာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ၊ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နယ်ပယ်မှာ လေ့လာထားသူ၊ အကို၊ အမတွေ အမြဲဆွေးနွေးလေ့ ရှိပါတယ်။ အကို၊ အမတွေဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာနေထိုင်ကျသူတွေဖြစ်ပြီး၊ on line ကိုအသုံးပြုကာ၊ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် ရဲ့ စာမျက်နှာတွေမှာ၊ ဆွေးနွေးကျတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှ Generator တွေကို၊ အတူ ပူးတွဲကာ၊ အပြိုင်မောင်းနှင်ခြင်းကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေကတော့ ကိုအောင်ဇော်ဦး၊ ကိုထွန်း၊ ကို blessing၊ ကိုလင်း၊ ကို thurein 27၊ ကို Htet Soe Paing၊ ကို Deep Blue နဲ့ မအေရာမေ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုထွန်း။ နောက်ထပ်ကြုံဖူးတာလေးတစ်ခုက သာမန် Load (50) % လောက်နဲ့ ဆိုမသိသာပဲ၊ voltage ရော frequency ပါ ငြိမ်ပါတယ်။ (30) KW လောက်ရှိတဲ့ Load ကိုတင်ပြီး၊ မိနစ် (၂၀) လောက်မောင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ engine RPM ကျသွားပြီး၊ ACB ကို ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ engine ရဲ့ jacket cooling water temperature နဲ့ lubricating oil pressure ကလည်း ပုံမှန်မှာရှိနေပါတယ်။ engine ရဲ့ tappet cover အဖုံးတွေကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ၊ unit တစ်ခုမှ cylinder head ရဲ့ push rod နဲ့ valve တွေကြားမှာ၊ မီးခိုးအဖြူတွေတွေ့ပါတယ်။ cylinder block မှ unit တစ်ခုခြင်းကို၊ temperature detector နဲ့ တိုင်းကြည့်တဲ့ အခါ၊ မီးခိုးအဖြူတွေထွက်တဲ့ unit ရဲ့ temperature က၊ သိသိသာသာ များနေတာကိုသတိထားမိပါတယ်။ cylinder head ကိုဖြုတ်ပြီး၊ piston ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ piston ring တစ်ချောင်း ကျိုးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
piston ring ကိုလဲပြီး၊ ပြန်မောင်းတဲ့အခါ၊ အရင်လိုပဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ unit က piston ring ထပ်ကျိုးပြန်ပါတယ်။ စဉ်းစားရ ခက်တာမို့ Engine တစ်လုံးလုံးကို တစ်စဆီဖြုတ်ခိုင်းကာ စစ်ရပါတော့ တယ်။ cylinder linner တွေက dry type ပါ။ cylinder block မှ cylinder cooling passage line တွေ choke ဖြစ်နေသလားလို့တွေးမိပြီး၊ cylinder block ကို၊ chemical cleaning လုပ်စေပါတယ်။ engine ကို ပြန်လုံးပြီး load တင်ကာသုံးတဲ့ အခါအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
load တင်လို့မရတဲ့ အဓိကပြသနာဟာ generator နဲ့ ACB ပိုင်းမှာမဟုတ်ပဲ၊ engine ဆိုတဲ့၊ prime mover ပိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ load တက်လာတဲ့အခါ၊ engine အတွက်၊ cooling efficiency ပိုမိုလို အပ်လာပါတယ်။ cylinder block ထဲမှ cooling passage line တွေဟာပိတ်နေတဲ့အခါ၊ cylinder liner ကို လုံလောက်တဲ့ cooling efficiency မပေးနိုင်တော့ သလို၊ cylinder liner ထဲမှာ၊ အထက်အောက် အတက်အဆင်းလုပ်နေရပါတယ်။ piston မှ liner အတွင်းဘက် မျက်နှာပြင်နဲ့ ပွတ်တိုက်နေရတဲ့ piston ring ဟာ cooling efficiency မလုံလောက်တဲ့အခါ၊ အပူချိန်ကြောင့် ကျိုးပါတော့တယ်။ piston ring ကျိုးတဲ့ cylinder unit ဟာ၊ generator သို့မဟုတ် load နဲ့ အနီးဆုံး unit ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine ဟာ prime-mover ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ generator ကို၊ load အဖြစ်ယူဆပါတယ်။ တကယ်တော့ ရေကြောင်း လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာရသလို၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုလည်း၊ လေ့လာထားမှသာ၊ ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ၊ စဉ်းစားပြီးဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအောင်ဇော်ဦး။ ဦးကြီးနက်ပြာ နှင့် ကိုထွန်း တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလိုသင်ပေးတဲ့အတွက်။ မအေရာမေ ကို လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမသာ question မထုတ်ရင်၊ ကျွန်တော်လိုနေ တာလေးတွေ သိလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ကို thurein27 ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိတဲ့၊ မှတ်စုစာအုပ်မှာတော့ အောက်ကလို၊ ရေးထားပါတယ်။
Question: How could you monitor the correct instant for synchronising without the aid ofasynchroscope or synchronising lamps?
Answer: Connectapair of 500V voltmeter probes across one phase of the incoming machine circuit breaker. Adjust the generator speed unit the voltmeter slowly fluctuates from zero to maximum. Close the breaker when the voltmeter passes through zero.
ကိုထွန်း ပြောချင်တာ ဒီအကြောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့ မသိပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မှန်းဆကြည့် တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီတော့ပစ်လေးကို စိတ်ဝင်စားမိပါသည်။ နောင်တော်၊ အမတော်တွေရဲ့ ကိုယ်တွေ့တွေ၊ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုင်းအဆမရှိ ပညာရနေပါသည်။ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးရေးသား ပေးကြ ပါခင်ဗျာ။ စောင့်ဖတ်နေပါ့မည်။
ကိုထွန်း။ ကိုသူရိန် ဖြေပေးထားတာဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မေ့နေလို့ပါ။ ကိုသူရိန်လည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦး ခင်ဗျား။
ကိုအောင်ဇော်ဦး။ လေးစားရပါသော ဦးကြီးနက်ပြာ နှင့် ကိုထွန်း တို့ ခင်ဗျာ။ ဥပမာပေါ့ ခင်ဗျာ။ engine rpm တစ်ခုကို sensing လုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့၊ rpm ရောက်မှ fixed voltage တစ်ခုထုတ်ပြီး၊ rectifier ကမှတဆင့် exciter coil ကို၊ voltage တစ်ခုကျွေးမယ်။ ဒါဆို fixed output voltage မရနိုင်ဘူးလားဗျာ။ စိတ်ကူးယဉ်များ ဆန်နေမလား။ အဲဒီလိုဆို စဉ်းစားထားတာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါ။
ကိုထွန်း။ အတွေ့အကြုံအရ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ generator ကိုတော့၊ AEG လား၊ Standford လားဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ prime-mover Engine က၊ Ruston inline6cylinder ပါ။ (500) KW လောက်ရှိပြီး၊ old design မို့ alternator cooling system ကို fresh water cooling သုံးထားပါတယ်။ engine rated RPM ရဲ့ (90) % ရောက်မှ၊ magnetic pick-up sensor သို့မဟုတ် Taco-generator မှ၊ detect လုပ်ကာ speed Relay ကတစ်ဆင့် voltage sensitized Relay ကို activated ဖြစ်စေပြီး၊ excitation voltage စပေးပါတယ်။ excitation voltage ကို AVR မှမပေးပဲ၊ Main Switch Board ထဲမှာတတ်ထားတဲ့ voltage sensitized Relay မှတဆင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ excitation voltage ရမှ generator ဟာ output voltage ထုတ်ပေးပါတယ်။
Fig. Voltage sensitized relay(or) Voltage monitoring relay
parallel မောင်းထားစဉ်ဘာမှမဖြစ်ပဲ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မမျှော်လင့်ပဲ generator တလုံးက ဝိုင်းဒိုင်းဆို ပြုတ်ကျသွားတတ်ပါတယ်။ generator ပိုင်းကို၊ loss of excitation ကြောင့်လား၊ AVR ကြောင့်လား၊ rotating rectifier တွေကြောင့်လား၊ low insulation ကြောင့်လား၊ စတဲ့အတွေးတွေ အပါအဝင် ACB ရဲ့ Safety System တွေကြောင့်လားအတွေးတွေနဲ့၊ နည်းမျိုးစုံ ကုစားခဲ့ပေမယ့် အရာမထင်ခဲ့ ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှ voltage sensitized relay ရဲ့ contact တွေကပဲ၊ နှိပ်စက်နေသလားလို့ တွေးမိပြီး၊ relay အသစ်တစ်လုံးနဲ့ အစားထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ Voltage sensitized relay လို့ခေါါတဲ့ Voltage monitoring relay တွေကို၊3phase,4wire distribution system တွေမှာသာ တတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊3phase,3wire distribution system တွေမှာ တော့ အသုံးပြုလေ့ မရှိတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
ကိုထွန်း။ ကြုံဖူးတာလေး နောက်တခုက ကိုအောင်ဇော်ဦး တွေးထင်တာနဲ့ တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်ပေမယ့်၊ prime-mover RPM ကို detect လုပ်ကာ၊ activated ဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စလေး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆက်ပြီး၊ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သဘေ်ာသားဘဝတုန်းက၊ ကြုံခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ shaft generator နဲ့ main generator တို့ကို၊ parallel မောင်းထားစဉ်၊ shaft generator ACB ပြုတ်ကျတဲ့ ကိစ္စလေးတပါ။ shaft generator prime-mover ဟာ၊ HANSHIN အမျိုးအစား4stroke medium speed diesel engine ဖြစ်ပြီး၊ generatorတွေက TAIYO အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ prime-mover နဲ့ shaft generator တို့အတွက်၊ transmission အဖြစ် Twin Disc ကထုတ်တဲ့၊ hydraulic gear box ကိုသုံးထားပြီး၊ hydraulic control system မှတဆင့်၊ clutch ကို engage နဲ့ dis-engage ဆောင်ရွက်ပေး
ပါတယ်။ prime-mover Engine ရဲ့ ideal speed ဟာ၊ (420) RPM ဖြစ်ပြီး၊ engine စလည်ပြီး၊ (400) RPM ကိုရောက်မှ၊ magnetic pick-up Sensor မှတစ်ဆင့်၊ transmission gear box ရဲ့ clutch control system ကို activated ဖြစ်စေကာ clutch ကို engage အနေနဲ့ 'On' စေပါတယ်။ shaft generator ရဲ့ ACB ရုတ်တရက်ပြုတ်ကျရတဲ့၊ အကြောင်းရင်းကိုရှာကြည့်တဲ့အခါ၊ ပထမဆုံး စဉ်းစားမိတာကတော့၊ generator out put voltage စေတဲ့ အပိုင်းတွေနဲ့၊ ACB protection system တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါ transmission gear box ထဲမှ၊ clutch တွေ Slip များဖြစ်နေမလားဆိုပြီး စဉ်းစားကြည့်သလို၊ အဖြေရှာကြည့်ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးမှ magnetic pick-up Sensor ဟာ malfunctioning ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပြီး၊ အသစ်လဲလိုက်တော့မှ၊ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုအောင်ဇော်ဦး။ ကျေးဇူးပါ ကိုထွန်း ရေ၊ ကိုထွန်း ရဲ့ မှတ်စုဟာ ကျွန်တော့်အတွက်၊ အဖြေတစ်ခု များလားလို့တွေးမိပါတယ်။အရင်တုန်းက result က generator engine power ကျတယ်လို့ယူဆပေမယ့် အခုနောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားမိပြန်ပြီ။ အထက်က ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သလို No. 1 generator ဟာ၊ speed နဲနဲပိုတင်ပေးမှ၊ rated power output ကို ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့၊ တကယ်လို့ speed sensing relay ကြောင်နေမယ်ဆိုရင်ရော။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံကနုသေးတော့ စဉ်းစားပေးကြပါဦး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ အရင်က speed sensing relay ရှိမရှိ သတိမထားမိဘူးဗျ။ ဦးကြီး deepblue နဲ့ ကိုထွန်း တို့ရေ၊ ကျွန်တော်က ဒီ ပြဿနာကို၊ တော်တော်စိတ်ဝင်စားနေလို့ပါ။ operation ရအောင် လုပ်ပေးချင်လို့ လိုအပ်တဲ့ data တွေကို၊ စုဆောင်းနေတုန်း အခုလိုကူညီဖြေရှင်းပေးတာကျေးဇူးပါပဲ။
မအေရာမေ။ အစ်ကိုသူရိန် ရှင့်၊ ကိုကြီးထွန်း သတိတရအစဖေါ်ပေးတာကို၊ မှတ်မှတ်ရရဖြေရှင်းဖေါ်ပြပေးလိုက်တာကြောင့် Synchro Scope သုံးဖို့၊ အဆင်မပြေစဉ်မှာ အရေးပေါ်ဖြေရှင်းနည်းကို၊ အမေးရောအဖြေပါ မှတ်သားဖွယ် သိရှိရပါတယ်။ Synchro တွဲမည့် Generator အချင်းချင်း Voltage တူညီဖို့၊ Frequency တူညီဖို့ဆိုတာတွေ၊ ချိန်ညှိဖို့ လွယ်ကူ သလောက် နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့၊ Phase တစ်ထပ်တည်းတူညီချိန်ကို သိရှိဖို့ ခက်ခဲနေလျှင်ဖြေရှင်း နည်းကို၊ သဘောပေါက်စေလိုတာလို့မြင်ပါတယ်ရှင်။ Phase sequence ကတော့၊ ပါဝါကြိုးကြီးတွေ လတ်တလောမှာ ဖြုတ်တာတပ်တာ၊ မရှိခဲ့လျှင် အရင်ကမှန်အောင် ဆက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း၊ တည်မြဲကာမှန်နေမှာလို့ ယူဆပုံရပါတယ်။ Sequence စစ်ဆေးဖို့၊ မီတာမရှိလျှင်3Phase motor အသေးလေး တစ်ခုခုကို၊ မောင်းကြည့်ပြီး Rotating direction ကို စူးစမ်းသိရှိနိုင်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ ဆွေးနွေးတာတွေနှင့် အကိုရာမည ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့၊ ကိုလျှပ်စစ် လို Blog တွေကို ဖတ်ကြည့်ရတော့၊ Synchro Scope က Phase ထပ်တူညီကြောင်း ဖေါ်ပြနေတာကို၊ Operator သိရှိဖို့နဲ့ လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဆုံးဖြတ်ခလုပ်နှိပ်ကာ၊ ACB ကို Close လုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးကြောင်း သဘောပေါက် သိလာရပါတယ်။ အဲဒီလိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကို (အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံတွေ့နေတာမဟုတ်ခဲ့ပဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်သာ ရခဲ့လျှင်) Synchro check Relay ၀ယ်ယူ တပ်ဆင် ထားခြင်းဖြင့်၊ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းပြီး မှန်ကန် တိကျစွာ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Operator ရဲ့ ACB close command အတွက် Dry contact လေး ထုတ်ပေးတာလို့လည်း ပစ္စည်းအကြောင်းရှင်းပြသူတွေဆီက၊ မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါတယ်ရှင်။ ရိုးရိုး Synchro Relay အပြင် Scope ပါ ပူးတွဲပါရှိပြီး၊ Programmable လည်းဖြစ်တဲ့ Relay တွေလည်း ပံ့ပိုးရောင်းချပေးနိုင်ကြပါတယ်။
ဟောဒီမှာ၊ ကိုကြီးတို့ အကြိုက်တွေ့မယ့် "DEIF" ရဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ဘယ်လို အသုံးချကြတယ် ဆိုတာကိုတော့၊ အစ်ကိုတို့ တတွေသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အချိန်ယူပြီးရေးပေး ပါဦးလို့ ဦးဦးဒိ ကို အေ၇ာ လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်။ အေ၇ာ ဆိုလည်း ဟိုကနည်းနည်း ဒီကနည်းနည်းနှင့် ပညာလေ့လာစုဆောင်းနေရသူဖြစ်လို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျှင် နည်းနည်းလေးရေးပြ ထားတာ ဖတ်ရှုရတာတောင် အမှန်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားစွာ ငံ့လင့်စောင့်စားနေသူတွေအတွက် အတိုင်းအဆများစွာ အကျိုးရှိစေတာကိုယ်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း သင်ဆရာမြင်ဆရာအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကို သတိတရဖေါ်ထုတ်ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။
မအေရာမေ။ အစ်ကိုအောင်ဇော်ဦး ရေ၊ Speed sensing ဆိုတာ Magnetic Pickup မှတဆင့်တိုင်းတာ တာကို ဆွေးနွေးလိုတာလို့မြင်ပါတယ်။ အေ၇ာ ထင်ထားတာကတော့ အဲဒီအပိုင်းက Engine Speed ကို Monitor လုပ်ဖို့ နှင့် Over speed Protection အတွက်ပဲလားလို့ပါ။ သတ်မှတ်ချိန်ကျော်လွန်လို့ Pickup Speedက နည်းနေလျှင် Generator ကို၊ မီးမထွက်စေပဲစောင့်ဆိုင်းနေအောင် အကာအကွယ် ယူနိုင်တယ် ဆိုတာရယ်၊ နောက်ဆုံး Start Fail အထိဖြစ်သွားပြီး အင်ဂျင်ကိုအလို အလျောက်ရပ်သွားစေတယ်လို့ ကြားဖူးတာပါ။
Generator ကြီး မီးထွက်နေပြီဆိုလျှင်တော့ ACB control အပါအ၀င် Load Share လုပ်မယ့် လျှပ်စစ် အစိတ်အပိုင်းတွေက Engine Speed ကိုစောင့်ကြည့်နေတာထက် Frequency အပေါ်ပဲ ပိုမို အလေးထားစောင့်ကြည့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ Engine safety အပိုင်းကတော့ Magnetic Pickup Sensor ကို ဆရာတင်ပြီး Power control အပိုင်းက Frequency ပေါ်ထွက်မှု ကို အဓိကထားတာ ပိုသဘာဝ ကျမလားလို့ပါရှင်။ (Frequency က သတ်မှတ်ထားတာထက် လျော့ကျသွားလျှင် AVR က Generator ကြီးတစ်ခုလုံး Output မထွက်တော့အောင် တားပေးဖို့ချိန်ညှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အထက်တနေရာမှာ ဦးဦးဒိ ရေးခဲ့တာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။)
Image credit to : http://www.indiapowerhouse.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 20:04